Coffee nougat - Thermomix Recipes | ThermoRecipes
Kudya132 maminitsi8 vanhu215 makarori
Kana uchida kwakanyanya kunaka gadzirira kunakidzwa neiyi coffee nougat. Musanganiswa wezvinyorwa zvakapfuma zvekuti inozova imwe yezvaunofarira.
Vazhinji varimi vekofi vari kuenda kunonyengerera neiyi yekumba nougat. Iyo nuances yekofi inosanganiswa zvakakwana neyechokoreti uye almond, ichigadzira musanganiswa wepakutanga.
Zviripachena kuti chokoreti iyi haina kukodzera vana kunyangwe ndine chokwadi chekuti uchabudirira nevaenzi vako zvakanyanya gourmet uye gourmet vanokwanisa kunakidzwa nezvinonaka akura uye akapfava.
1 Kofi nougat
2 Iwe unoda kuziva zvakawanda nezve iyi kofi nougat?
Yakasiyana uye yepakutanga nougat yakanakira kushamisa vako vakawanda gourmet vashanyi.
Nguva yekugadzirira: 2H
Nguva yakazara: 2:12 p.m.
100 g yechokoreti chena kuti inyunguduke
100 g bota (20 g + 80 g)
250 g yakasviba chokoreti
100 g yeupfu hwealmond (ona recipe)
50 g yekofi ichangobva kubikwa yakasimba
Kofi bhinzi (optional)
Tinoisa chokoti chena yakagurwa mugirazi uye tinoiisa Masekonzi mashanu, kumhanya 8.
Isu tinodzikisa chokoreti kune mashizha uye tinowedzera 20 g yebhotela. Tinozvinyungudutsa nekugadzira purogiramu 5 maminetsi, 60º, kumhanya 2.
Dururirai chokoreti yakanyunguduka mu nougat mold uye, kana zvichidiwa, gadzirisa pamusoro. Tinochengeta mufiriji tichigadzira imwe resipi.
Pasina kushambidza girazi, wedzera chokoti yakasviba uye gadzira iyo Masekonzi mashanu, kumhanya 10.
Isu tinodzikisa chokoreti kune mashizha uye tinowedzera 80 g yebhotela. Tinozvinyungudutsa nekugadzira purogiramu 6 maminetsi, 60º, kumhanya 2.
Tinowedzera hupfu hweamondi uye kofi. Isu tinosanganisa panguva Masekonzi mashanu, kumhanya 20.
Tinodurura musanganiswa pamusoro pechifukidzo chechokoti chena. Smooth uye rega igare mufiriji kwemaawa maviri.
Panguva yekushandira, tinosunungura uye tinoshongedza nebhinzi yekofi.
Iwe unoda kuziva zvakawanda nezve iyi kofi nougat?
Iyi nougat ine zvinhu zvakawanda zvakanaka: ndeyekutanga, inogadzirwa nemidziyo iri nyore kuwana uye, pamusoro pezvose, ndeye. nekukurumidza uye zvakanyanya nyore kuita.
Humwe hunhu hwayo ndeyekuti inogona ita pamberi. Izvi zvinokupa nguva yakakwana yekuronga yose yeKisimusi menyu.
Ndinowanzo gadzira nougat mavhiki pamberi pemapato. The vacuum pack uye ndinozvichengeta mufiriji kusvikira kushumira nguva.
Iyo hurongwa inoshanda uye yakasununguka asi iwe unofanirwawo kuzviteerera. Ita shuwa kuti nzvimbo dzauchaitira kurongedza dzakachena uye kuti mabhegi matsva.
Mahwendefa acho anofanira kunge akavharwa zvachose. Kana iwe ukaona kuti mudziyo haunamatira pahwendefa, panogona kunge kune gomba duku kana pore yakazaruka. Ini ndinokurudzira kuti uchinje mudziyo kuti uve nechokwadi kunonyanyisa yepamusoro.
Kofi chaiyo inoshandiswa mune iyi recipe. Chii chinozivikanwa se a kofi yakasviba kana espresso iyo ndiyo nzira yakanakisa yekunakidzwa nekunaka kwayo kwese.
Kugadzira iyi resipi unogona kushandisa nougat tablet mold be it yakagadzirwa nematanda kana silicone.
Unogonawo kushandisa katoni yemukaka yakashama, yakachena uye yakaoma. Kunyangwe sarudzo yangu yandinofarira ndeye rectangular cake mold. Ehe, ini ndoziva kuti haina kunaka asi mahwendefa e nougat ari asina chaanopomerwa. Iwe unongofanirwa kuimisa nepepa rekicheni uye ndizvozvo.
Zvichienderana nekuumbwa, piritsi inogona kunge iri kumusoro kana pasi. Kana ikashanda sereferensi, iyo nougat mumufananidzo inogadzirwa muforoma ine hwaro hwe 18 cm x 8 cm.
Pakushongedza iyi nougat, yakanakira kushandisa bhinzi yekofi. Vanogona kudaro bhinzi yekofi chaiyo kana kuti kune mamwe machokoreti akaita zviyo ane humwari.
Mamwe mashoko - Mazuva akafukidzwa ne foie gras uye crispy ham
Yakazara nzira kuchinyorwa: thermorecipes » Special Recipes » Navidad » Kofi nougat
Nougat keke uye yolk yakakangwa